कोरोना संक्रमण नियन्त्रण पछि के हुुन्छ ?
मित्र सन्तोष आचार्यको अनलाइनमा “कोरोना प्रकोपमा हाम्रो पत्रकारिता” विषयको लेख पढेँ । पढिसकेपछि साँची यो कोरोना भाइरस संक्रमण पछि अहिले चलिरहेको सामाजिक, साँस्कृतिक आर्थिक, राजनैतिक पद्दतिहरुमा कति परिवर्तन होला कि नहोला ? भन्ने प्रश्नले निकैवेर सोच्न वाध्य बनायो । तर पहिले सोच्नलाई बाटो खोलेको त्यो सन्तोषजीको लेखको विषयलाई एकैचोटी छोडेर आफ्नु कुरा राख्नु हुन्न भन्ने लाग्यो । फेरी प्रतिक्रिया पाउ है भनेर बहाँले नै लेखे पछि कलम चलाउदाँ अन्यथा हुन्न जस्तो लागेर संचार माध्यममा करिब १२ वर्ष पछिको यो कार्य फेरि गर्दै छु ।
सन्तोषजीको लेखको पृष्ठभागमा कोरोना प्रकोपको उद्विकास र प्रसारको विषय उल्लेख छ । केही फ्लु, महामारी र भाइरसका चर्चा छन । तर ति विगतका फ्लु, महामारी र भाइरसभन्दा फरक चरित्र र स्वभाव वोकेर दौडिएको छ – “कोरोना भाइरस (COVID 19)” जसले महाशक्तिहरुलाई समेत आपद खेलाइ रहेको छ । संक्रमण तर्फको सार सायद यही हो । यसमा मैले थप्नु पर्ने, घटाउनु पर्ने र हटाउनु पर्ला जस्तो लागेको केही छैन ।
सन्तोषजीले लेखको मुख्य विषय “पत्रकारिता” लाई वनाउनु भएको छ । “कोरोना भाइरस(COVID 19)” संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिले सवै राष्ट्रले गरिरहेको एउटा मुख्य अभ्यास हो – “लक डाउन” । यो बेला सूचना सम्प्रेषणका मुख्य विकल्पहरु इलोक्ट्रोनिक मिडिया देखिएको छ । जसमा एफ एम रेडियो, अनलाइन संस्करणहरु, सामाजिक संजालहरु (फेसबुक, ट्वीटर), यूट्यूब, टेलिभिजनहरु मुख्य छन । मेरा अर्का संचारकर्मी मित्र ज्ञानेन्द निरौलाजीले आफ्नो फेसवुक पेजमा “कोरोना भाइरस (COVID 19)” संक्रमण नियन्त्रण सचेतनामा रेडियो पहिलो स्थानमा भनेर लेख्नु भएको थियो । ल यसको प्रभावकारितालाई थप अङ्क दिउ । यो बाहेक आजसम्म सवैभन्दा वढी प्रभाव छोड्दै आएको र प्रश्न उठ्दा प्रमाणको रुपमा पेश गर्न सजिलो आम मानिसहरुको पहुँचमा रहेको प्रिन्ट मिडिया – जो अहिले अधिकांश मुलुकहरुमा लगभग वन्दको अवस्थामा छन । कारण सन्तोषजीकै लेखमा नै उल्लेख छ ।
सक्दा समय र परिस्थितीलाई आफू अनुकुल वनाउने, नसक्दा सवैभन्दा छिटो समय र परिस्थिति अनुकुल वनिदिने संसारमा कुनै प्राणी छ भने त्यो मानिस नै हो । मानिसको यो स्वभावका कारण कतै “प्रिन्ट मिडिया” संकटमा त जाँदैन । सन्तोषजीको लेखको रचना गर्भ यहि हुन सक्छ ।
दोश्रो – “प्रिन्ट मिडिया” धानी रहेका वा चलाइरहेको विज्ञापन बजार । यो नै सङ्कटमा गए पछि कसरी छापा पत्रकारिता टिक्ला ? पत्रकारिताका धर्म, जनचाहना अनुसारको सूचना सम्प्रेषण, पत्रकारिता भित्रको अनुकुलता र प्रतिकुलता – यी विषयहरु सन्तोषजीहरुले नै बहस गर्दै व्यवस्थित वनाउनु हुनेछ किनकी वहाँहरु त्यही भित्र क्रियाशिल हुनुहुन्छ । तर अनेकन चुनौति र सङ्कट देखाए पनि अन्तिममा उहाँले आफ्नु नाम जस्तै “जबसम्म पुस्तक प्रकाशन र पठनपाठनको युग कायम रहन्छ तबसम्म छापा पत्रकारिताको आयु रहन्छ” भनेर सन्तोषको सास पनि फेर्नु भएको छ । “कोरोना भाइरस (COVID 19)” संक्रमण नियन्त्रणका लागि भएको लक डाउनको वेला छापा पत्रिका माथि देखिएको सङ्कट पछिको चुनौतिपूर्ण अवसरका लागि आफूलाई तयार गर्ने भनि उल्लेख भएको सन्तोषजीको हरफमा “हस्त लिपीबाट विकास भएको पत्रकारिता जसरी छापा पत्रकारितामा रुपान्तरण भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ, त्यसरी अघि वढ्नेछ” भन्ने वाक्याँश मात्र थपि दिए मैलै । छापा मिडिया वाहेक इलोक्ट्रोनिक मिडियाको विश्वसनियता कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयका दुइवटा नेपालमा भरखरै भएको घटनाहरुको उदाहरण लेखेको भए सायद छापा माध्यमको औचित्य पुष्टि गर्न थप सजिलो हुन्थ्यो । बहाँले उठाएका अन्य केही प्रश्न र विषयहरु विपद्का वेला अभ्यास गरिएका विषयहरु हुन जस्तो लाग्छ । फेरी यो अभ्यासले इगोको रुप ग्रहण गर्यो भने र चौतर्फी सङ्कटमा समाज गुज्रिएको बेला वारुदको थुप्रोमा सलाईको काँटीको काम गर्न चै पक्कै सक्छ ।
तेश्रो – कोरोना प्रकोपमा पत्रकारका तीन काम –
क. व्यक्तिगत सुरक्षा
ख. परिवार र समुदायको सुरक्षामा विशेष चासो
ग. सार्वजनिक खवरदारी
उल्लिखित विषयको ज्ञाता सन्तोषजीहरु नै हो यसमा पनि मेरो कुनै सुझाव छैन । सन्तोषजीको लेखमा मेरो यति मात्र प्रतिक्रिया ।
अब शुरु गरौ केही विषय जो यस पछि संभावित छन । “कोरोना भाइरस(COVID 19)” संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास भै रहेको यो वेला कोरोना भाइरससँग जोडिएका वाहेक अन्य बहुँत थोरै विषयहरुको मात्र अहिले विश्लेषण भै रहेको छ । केही केही विषयहरु विश्लेषणात्मक छन । केही मजाकका रुपमा आइरहेका छन । कतिपय मजाकहरु भद्दा छन, कतिपय निकै सान्दर्भिक । यसका केहि शिर्षकहरुलाई लिपीवद्ध गरौं जसका वारेमा लेखहरु आई रहेका छन्ः
– “कोरोना भाइरस (COVID 19)” संक्रमण नियन्त्रण पछि विश्वको शक्ति सन्तुलनमा फरक पर्ने कि नपर्ने ?
– के जैविक युद्धको अभ्यास प्रारम्भ गरिएको हो ?
– पूँजीबादमाथीको सङ्कट वा पूँजीबादले ल्याएको सङ्कट के हो अहिलेको अवस्था ?
– के खुल्ला समाजभन्दा वन्द समाजमा मानववढी सुरक्षित छ ?
– के विश्वका धनाढ्यहरुको स्थिति खस्कदै छ ?
– पूर्विय दर्शन नै उत्कृष्ट दर्शन हो ? अथवा धर्मविरुको आशिवार्दबाट कोरोना ठिक हुन्छ ?
– पश्चिमाकरण, विश्वव्यापीकरण र परनिर्भरताको नै विनाशको कारण हो ?
उल्लिखित विषयहरु मध्ये धेरै राजनैतिक अर्थशास्त्रका विषयहरु हुन । केही त फगत सूचनालाई स्वादिलो वनाउने गरम मसाला मात्र । कोरोना भाइरस (COVID 19) नियन्त्रण पछि हाम्रो वरीपरि रहेको वा हामीले स्वीकर गरिरहेको सामाजिक जीवन कस्तो होला भन्ने हो ? कतिपय विषयहरुका बारेमा हामीले सोच्न नै सकिरहेका छैनौ । जस्तैः
– विश्व श्रम वजारको स्थिति कस्तो होला ?
– राज्य आवश्यक छ कि छैन ? राज्य विहिन समाजको वहसको सन्दर्भ सकिएको हो ?
– राज्यको कुन कुन क्षेत्रमा एकाधिकार हुन जरुरी छ ?
– राज्यको सवैभन्दा वढी लगानी कुन क्षेत्रमा हुन जरुरी छ ?
उत्पादनका स्वरुपमा आउने परिवर्तनले समाजको अन्य संरचनाको निर्धारण गर्छ । हामी अहिले कायम रहेका उत्पादनको स्वरुपको आधारमा निर्माण भएको सामाजिक संरचना भित्र छौ । हामी केहीलाई लाग्न सक्छ, यसवेला कहि कतै देखिएका केही सफलताहरु व्यवस्थाका कारण भएका हुन । तर के वुझ्न जरुरी छ भने व्यवस्था भित्रको मानवीय मूल्य, मान्यता र आदर्शको निर्माण उत्पादनको स्वरुपबाट निर्धारित हुन्छ । त्यसैले अहिलेको बहसको एउटै विषय हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ – “के कोरोना भाइरस (COVID 19) बाट उत्पन्न संङ्कटले उत्पादनको स्वरुप(MODE OF PRODUCTION) मा नै परिवर्तन गर्दछ त ?”
(लेखक हिमालयन मल्टिपल कलेज, मेचीनगरका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् । )
कोरोना प्रकोपमा हाम्रो पत्रकारिता